Uhlu lwezinombolo zocingo lweJordani | Inombolo yocingo | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwezinombolo zocingo lweJordani
Izinombolo Zefoni zaseJordani
Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseJordani lufakiwe lapha, inombolo yefoni eyi-10000 yomthengi enemininingwane ephelele. Sinikeza zonke izinombolo zocingo zomthengi ezivumelekile nezithuthukisiwe ezivela eJordani ngamanani ashibhile. Uma uthumela abathengi bakho abanikela ngokuqondile endaweni eyiJordani bese uthenge uhlu lwezinombolo zocingo lweJordani manje.
Uma uthuthukisa ibhizinisi lakho eJordani, ungathenga lolu hlu lwezinombolo zocingo lwabathengi eJordani lapha. Ungathola lapha inombolo yefoni, igama lokuxhumana, ikheli, idolobha, njll. Ungathenga le nombolo yocingo kaJordani futhi uthuthukise ibhizinisi lakho elincane.
Thenga I-Jordan Consumer People Ucingo Ucingo
Uhlu Lwamafoni labathengi bakwaJordani
Uhlu lwabasebenzisi bezinombolo zabathengi baseJordani, uhlobo oluthile lwedatha ukufinyelela izinhloso zakho zomkhankaso we-telemarketing ezinqunywa yizinto ezahlukahlukene, okubandakanya imakethe yakho eqondiswayo kanye nabazitholela ukumaketha kwe-sms, ukumaketha nge-imeyili kanye nomkhankaso wokubiza amakhaza.
Database Lokugcina Lokuposa kungumthombo wohlu lokuholela lwabathengi, ungaqiniseka ukuthi i-database yezingcingo zabathengi baseJordani isesikhathini, inikezela ngemininingwane efanele ngamakhasimende wamanani ngentengo engabizi yohlu lwefoni yebhizinisi kodwa inganikeza imininingwane ephezulu kakhulu ukwenza ngcono ukuthengisa kwakho okungasebenzisa ibhizinisi lakho.
Ukuthenga, uhlu lwezinombolo zocingo lweJordani, kuyindlela esebenzayo kunazo zonke yebhizinisi, noma ngabe uhlela ama-aphoyintimenti, uhlinzeka ngemininingwane, noma uthengisa ngqo ngocingo unenombolo yokuqondisa abantu efanelekile ukuqondisa amaklayenti ngempumelelo enkulu.
Uhlu lwabathengi bezingcingo zeJordani liqukethe ama-10,000compiled amarekhodi abuyekeziwe ohlu lwabathengi bezinamba olungamadola angama-300, inkokhelo yesikhathi esithile kanye nesoftware engalandelwa ngokushesha engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV.
Lolu uhlu lokukhetha izingcingo zabathengi kusuka database yethu, oluqoqiwe futhi lwahlungwa ngabasebenzi bethu bocwaningo olunesiqinisekiso esikhulu. Uhlu lwefoni yebhizinisi okuqondiwe ngalo luyeza nedatha ebalulekile ongayisebenzisa ukukhulisa imizamo yakho yokuhlwaya. Gcina isikhathi sokubiza amathemba ngenxa yomthombo ohleliwe novuselelwe wezinhlu zocingo zabathengi bakwaJordani.
Jordan Ucingo Inombolo Umbuzo & Impendulo
I-Austria Shayela Izinombolo Zefoni
I-Bahamas Ucingo Database Uhlu
I-Bahrain Telemarketing Lists